Naqshadaynta jawaabta iyo barta tilmaan bixinta moobiilka | Martech Zone
Naqshadaynta jawaabta iyo barta tilmaan bixinta moobiilka
Monday, June 29, 2015 Axad, Juun 28, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah sababaha aan u soo jiidanay kicinta si kor loogu qaado degelkeenna mawduuc cusub oo moobiil lagu hagaajiyay ma ahayn oo kaliya dhammaan buuqii ay Google iyo xirfadlayaashu ka sameynayeen goobta SEO. Waxaan ku aragnay nafteena kormeerka goobaha macaamiisheena. Macaamiishayada leh bogagga jawaabta leh, waxaan ku arki karnay koboc ballaadhan oo ku saabsan dareenka raadinta moobiilka iyo sidoo kale kordhinta booqashooyinka raadinta moobiilka.
Haddii aadan arkin booqashooyin ku soo kordha adiga Analytics, waa inaad iska hubisaa xogta webmaster-ka. Xusuusnow, Analytics kaliya waxaa lagu cabirayaa dadka horey u yimid goobtaada. Maamulayaasha websaydhadu waxay cabbiraan sida bartaada ay ugu shaqeyneyso natiijooyinka raadinta - haddii martida ay dhab ahaan gujinayaan iyo in kale. Markii aan u beddelnay dhammaan macaamiisheenna bogagga jawaabta leh sanadkii la soo dhaafay, waxaan sii wadnay inaan aragno koror wanaagsan oo ku saabsan taraafikada raadinta moobiilka.
Adiguna wali ma aadan dhamayn. Ka jawaab celinta waa hal shay, laakiin hubinta waxyaabaha boggaaga ku jira ayaa loo habeeyay dadka waawayn ee suulasha suunka waa mid kale. Raadinta Google Console waxay ku siisaa macluumaad faahfaahsan bartaada iyo waxaad u baahan tahay inaad ku horumariso khibrad moobiil oo la habeeyay.
Sida loo Xaqiijiyo Waxqabadka Raadinta Mobilkaaga
Hubinta waxqabadkaaga raadinta moobiilku maahan wax adag. Soo gal Raadinta Raadinta Google, u gudub Raadi Gadiidka> Falanqaynta Raadinta, wax ka beddel shaandhadaada iyo taariikhda baaxadda leh, waadna arki kartaa sida boggaagu u socdo. Waad arki kartaa qasabadahaaga iyo aragtiyaha labadaba. Sida aad ku arki karto boggayaga, waxaan si cadaalad ah ujoogsaneynay illaa naqshad cusub oo jawaab celin ah dhowaan ay siisay dhiirrigelin wanaagsan.
Google ayaa si fudud u doorbidaysa naqshadeynta jawaabta leh. Tan waxaa lagu caddeeyey mashiinnada raadinta kaladuwan ee algorithm waqti ka dib, iyo gaar ahaan isbeddelkan ugu dambeeyay. Naqshadaynta jawaabta waxay u sahlaysaa Google inuu gurguurto, tusmo, iyo abaabulo bartaada. Soo Degso Tilmaamaha qeexan ee Marketo ee Suuqgeynta Moobiilka wixii macluumaad dheeraad ah.
Infographic: Tag Mobilo oo Jawaab… Ama Gurigaaga Tag!
Tags: google raadinta moobiilkamareegaha googlegoogle webmasters mobileraadinta moobiilkahagaajinta mashiinka raadinta moobiilkaseo mobilemacalimiin
Xayeysiisyada Mobilada Moobaylka ah waxay ku saabsan yihiin sheekada Iib La'aan
7 Istaraatiijiyad Loo Adeegsaday Sirdoonka Qiimeynta Qeexitaan